Xarakatul shabaab al mujaahid ayaa mar kale ku hanjabtay inay qaraxyo aar-gudasho ah ka geysan doonto gudaha dalka Kenya | Somaale.com
Xarakatul shabaab al mujaahid ayaa mar kale ku hanjabtay inay qaraxyo aar-gudasho ah ka geysan doonto gudaha dalka Kenya
Al-Shabaab ayaa mar kale ku hanjabtay inay qaraxyo aar-gudasho ah ka geysan doonto gudaha dalka Kenya, kaasoo jawaab u ah qabsashadii magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose, kadib markii horaantii bishan ay qabsadeen Ciidamada is garabsanaya.
Warbixin lagu daabacay bogga Twitter-ka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Kenya ay ka shalaayi doonto soo gelitaankii Gobolada Koofureed iyo dhibaatooyinka ay u geysato dadka Muslimiinta.
“Kenya waxay ka shalaayi doontaa sida ay go’aan ugu gaartay inay soo gasho gudaha Soomaaliya iyo inay la dagaalameyso Mujaahidiinta Soomaaliya, waa shalayn doonaan waana barooran doonaan”ayaa lagu yiri qoraalka la soo dhigay bogga Twitter-ka Al-Shabaab.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ku dadaalo doonaan in qaraxyo waa weyn ka geystaan dalka Kenya, iyagoo sii wadi doona dagaalka ay kula jiraan inta ay guulo ka gaarayaan.
Digniintan ayaa ku soo beegmeysa markii maalintii Ciida Fariin maqal ah oo uu soo saaray Amiirka Al-Shabaab Abuu Zubeyr uu ku sheegay in qaladaad taariikhi ah la galay markii Kenya soo gashay dagaalka, isla markaana ay ka qoomameyn doonto Kenya.
Ciidamada Kenya oo taageeraya kuwa dowladda ayaa soo galay bishii October Gobolada Koofureed, kadib markii ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana ay haatan ku sugan yihiin deegaano ka tirsan Jubada Hoose iyo Gedo.
Al-Shabaab ayaa bishii July ee sanadkii 2010 ka geystay qaraxyo xoogan oo ay ku dhinteen dad ka badan 70-ruux magaalada Caasimada Uganda ee Kampala, iyadoo weerarkaas uu ahaa kii u horeeyay meel ka baxsan Soomaaliya ka fuliyaan, waxaana ay ku sheegtay inuu jawaab aar-gudasho u ahaa dhibaatooyinka Ciidamada Uganda u geystaan shacabka Soomaaliyed.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo isku raacay howlgal cusub oo loogu magacdaray UNSOM
Dowladda Qadar oo casuuntay Madaxweynaha Soomaaliya + Sawirro
Guddoomiye ku xigeenkii Dagmada Baydhabo oo la dhaawacay